Dhaqaalaha Soomaaliya Iyo Khubarada Waqooyiga Soomaaliya. – KHAATUMO NEWS
Dhaqaalaha Soomaaliya Iyo Khubarada Waqooyiga Soomaaliya.
Golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya shanta mas’uul ee gacanta ku hayaa waa reer waqooyi.
1.Wasiirka Maaliyadda Bayle. Boorame
2.Wasiirka Ganaciga Maareeye Togdheer.
3.Wasiirka Qorshaynta Jamaal Sanaag.
4. Guddoomiyaha Gudiga Dhaqalaha Qaranka Cali Ciise Cabdi Sool.
5.Iyo Raysal wasaare ku xigeenka Khadar W/ Galbeed.
Intii aanu Ingiriisku xoriyadda u ogolaanin gobolada waqooyiga Soomaaliya 26.06.1960 ayaa waxa gobolada Koonfureed ee Soomaaliya gumaysigii Talyaanigu u ogolaaday 10 sanno oo loogu diyaarinayey in 1960 madax bannaani la siindoono, waxaana gobolada Koonfurta Soomaaliya laga sameeyey maamul hoosaad loogu diyaarinayey dawladda ay hanan doonaan waxayna xukun hoosaad isku maamulayeen 1950-1960.
Ururkii SYL oo dhammaan dhulka Soomaalidu degto raad ku lahaa ayaa fikirkii uu faafinayey saamayn ku yeeshay bulshadii Soomaaliyeed gebi ahaanteedba, waxaana xafiisyo badan laga furay magaalooyinkii waaweynaa ee dhulka baaxadda weyn ee Soomaalidu degto ku teedsanaa.
Bulshadii ku dhaqnayd Gobolada Waqooyi “Somaliland “ waxaa raad ku yeeshay walaalahooda Koonfurta Soomaaliya oo xoriyad qaadanaya 1960kii, waxayna jeclaysteen in aan laga reebin, Ingiriisku muddooyinkii hore oo dhan wuu ka dhaga adeegay, Laakiin laydhii xornnimo-doonka ee qaaradda Afrika hadhaysay ayuu ku godladay Ingiriisku, afartii sanno ee 1960 ka horeeyey waxaa jirtay arday dibadda loo diray si ay waxbarashadooda uga soo dhamaystaan, waxayna u badnaayeen arday dugsiyadii markaa jiray ee Shiikh Iyo Camuud wax ku baran jirtay oo dhammaan deegaanadii waqooyiga Soomaaliya ka soo jeeday.
Maxamed Buraale Ismaaciil Ilaahay hawnaxariistee wuxuu ka mid ahaa ardaydii badhtamihii 1950 loo diray dalka Suudaan si ay waxbarashadooda ugu soo dhamaystaan, markuu soo noqdayna wuxuu ka mid noqday kaadiradii ugu horeeyey ee dalka kala wareegay Ingiriiska , wuxuuna ka mid ahaa raggii shaqadii xafiiska dawlada Hoose ee Hargeysa Ingiriisku ku wareejiyey sida uu ii sheegay mar aanu kula sheekaystay magaalada Laascaanood 2005tii.
Adeer Maxamed Buraale Ismaaciil wuxuu iiga sheegay xilligaas markii xornnimada la qaatay ee labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfur laysku daray ciladihii la soo gudboonaaday shaqaalihii labada dhinac ee laysku daray. Dhibaatada ugu weynayd waxay ka timi shaqaalaha labada dhinac oo kala mushahar badnaa, waxaana mushahar badnaa shaqaalaha Gobolada Waqooyi “Somaliland”. Wasaaradii arrintaas qaabilsanayd ayaa loo xilsaaray mideynta mushaharka iyo gunnooyinka dawladda.
Markii daraasad la sameeyey waxaa soo baxday laba arrimood in midkood la yeelo.
1. In Shaqaalaha Gobolada Waqooyi mushaharka laga yareeyo oo lala simo shaqaalaha koonfur.
2. In shaqaalaha koonfur mushaharka loo kordhiyo oo lala simo kuwa waqooyi.
Daraasad ka dib waxay xukuumaddii xilligaas sharciyeysay in mushaharka shaqaalaha dhammaantii laga dhigo kii Koonfur si dawladda miisaanayadeeda aanu culays ugu darsamin.
Maanta waxaa dhaqaalaha dalka Soomaaliya dhidibada u taagaya waa khubaro reer Waqooyi ah sidaas oo ay tahay ayey muhiim tahay in aragtida 4.5 iyo Federaalka laga saaro goobta oo qaabkan qori isu dhiibka ah laga badelo ee ka jira dhammaan deegaanada Soomaaliyeed oo dib loo saxo labada Dastoor ee midna qoran yahay midna ku lifaaqan yahay ee qori isu dhiibka sharciyeynaya.
Previous Post: Deg Deg:Saxafi lagu Dhaawacay laascaaanood,
Next Post: Deg Deg Daawo Video:Muuse Biixi Oo Amar Duldhigay Hotel Lagu Tunto Oo Kuyaal Hargaysa,